महिलाको कुन अंगमा छुदा उत्तेजीत हुन्छन ? जान्नै पर्ने कुरा – Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
महिलाको कुन अंगमा छुदा उत्तेजीत हुन्छन ? जान्नै पर्ने कुरा
March 13, 2020 March 13, 2020 थाहा अनलाइन
हामिले सहजै बुझेको कुरा पनि हो महिलाहरुको अंग पुरुषहरुको भन्दा बेग्लै हुन्छ । तर पुरुषहरुका लागि कौतुहल्ताको बिषय भनेको महिलाको शरीरमा कुन अंग कति संवेदनशील होला भन्ने हो । अब भने यो बिषयमा धेरै सोचिरहनु पर्दैन ।
निक्कै लामो अनुसन्धानपछि शोधकर्ताहरुले महिलाको शरीरका कुन अंगको संवेदनशीलता के भन्ने प्रश्नको विस्तृत जवाफ दिएका छन् । हालै गरिएको एक अध्यनले स्त्रीको शरीरमा कहाँ विस्तारै स्पर्ष गर्ने कहाँ जोडले थिच्ने र कहाँ कम्पन पैदा गर्दा उनीहरुलाई यौनिकरुपमा उत्तेजित पार्न सकिन्छ भन्ने तथ्य बाहिर ल्याएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा महिलाको घाँटीमा हल्का स्पर्स गर्नु निक्कै प्रभावकारी हुने देखियो । कुनै पनि महिलालाई उत्तेजित तुल्याउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय स्तनको टुप्पो अर्थात निप्पल चलाउनु वा स्पर्ष गर्नु रहेको अध्यनकर्ताको निष्कर्ष छ ।
त्यसैगरी यौन क्रिडाको समयमा भने स्त्रीको योनीको बाहिरी माथिल्लो भागमा हुने क्लिटोरिसमा कम्पन पैदा गर्नु सबैभन्दा उत्तम रहेको पाहियो । यौन क्रिडाका लागि स्त्रीलाई तयार पार्दा यी विधी निक्कै प्रभावकारी मानिएका छन् ।
क्यानडाको युनिभर्सिटी डु क्यूबेक ए मोन्ट्रियलका अध्यनकर्ताहरुको टोलीले १८ देखि ३५ वर्ष उमेरका ३० महिलामा लामो समय सम्म यो अध्यन गरेको थियो । उनीहरुको शरीरका तीन भागमा विभाजित यो अध्यनले सदियौं देखि सोधिँदै आएको प्रश्नको जवाफ फेला पारेको हो ।
तर माथि भनिएका कुराहरु स्त्री थाकेको बेला, ध्यान अन्यत्रै बढीरहेको बेला वा अन्य तनावको बेला भने लागु नहुने अध्यनकर्ताको भनाइ छ । अध्यनकर्ताहरुले महिलाहरुलाई निर्वस्त्र पारेर टेवलमा सुत्न लगाएका थिए । र विभिन्न उपकरणको माध्यमबाट अंगहरुको स्पर्स परीक्षण गरिएको थियो ।
कुन अंगमा के गर्ने ?
हल्का स्पर्षः घाँटी, पाखुराको अगाडीको भाग र योनीको पछिल्लो भाग (योनी र गुदद्वारको सीमा क्षेत्र) मा हल्का स्पर्ष गर्दा महिलाहरु उत्तेजित हुन्छन् ।
दवावः क्लिटोरिस र निप्पलमा चलाउँदा गर्दा स्त्रीहरु उत्तेजित हुन्छन् । तर स्तनको छेउँको भाग र पेटमा स्पर्षले भने खासै उत्तेजना ल्याउँदैन ।
कम्पनः क्लिटोरिस र स्तनमा कम्पन पैदा गर्दा स्त्री सबैभन्दा उत्तेजित हुन्छन् ।
यो अध्यन जर्नल अफ सेक्सुअल मेडिसिनमा प्रकाशित छ ।
दाङमा जुवा खेल्दै गरेको अवस्थामा १० जना पक्राउ
सुत्नु भन्दा पहिले पिउँनुहोस एक गिलास तातोपानी
दाङको बबई गाउँपालिकामा आँखा सिविर सञ्चालन हुने
May 20, 2019 थाहा अनलाइन
दाङ पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा , ढुक्क हौं, दाङ नै राजधानी हो ःमहरा
January 7, 2018 थाहा अनलाइन
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाएकोमा स्थानीयमा खुसी
November 6, 2019 November 6, 2019 थाहा अनलाइन